'क्यानाडा नेपालसँग व्यापारिक साझेदार बन्न चाहन्छ' - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / नसोधिएको प्रश्न / ‘क्यानाडा नेपालसँग व्यापारिक साझेदार बन्न चाहन्छ’
क्यानाडा नेपालको १२ औं निर्यात बजार हो। नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८३ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको बस्तु क्यानाडा निर्यात गरेको थियो। सोही अवधिमा क्यानाडाबाट तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालले एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो।
नेपालको क्यानाडासँगको व्यापारघाटा अन्य मुलुकसँगजस्तै बढ्दो छ। तर नेपाल र क्यानाडाको दौत्य सम्बन्धको ५० औं वार्षिकोत्सव यसै साता मनाउँंदै गर्दा नेपाल पछिल्लो समय क्यानाडेली लगानीकर्ताका लागि आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्न थालेको छ।
काठमाडौं-हेटौंडा सुरु ङमार्ग र दूरसञ्चारका क्षेत्रमा लगानी गर्न क्यानाडेली लगानीकर्ता नेपाल आइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा क्यानाडेली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रालय तथा मानवअधिकारका संसदीय सचिव दीपक ओबराय यसै साता नेपालको भ्रमणमा थिए।
अन्नपूर्णका लागी कुवेर चालिसेले ओबरायसँग क्यानाडेली लगानी र आर्थिक सम्बन्धका विषयमा गरेको कुराकानी :
नेपाल र क्यानाडाको दौत्य सम्बन्धको ५० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा नेपाल क्यानाडाको आर्थिक कूटनीतिको नक्सामा कहाँ पर्छ?
५० वर्षदेखि क्यानाडाले नेपालमा विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। तर अब ५० औं वर्षको दौत्य सम्बन्धपछि दुई देशबीच सुदृढ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा जोड दिने बेला भएको छ।
क्यानाडेली लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित छन्। दुईवटा आयोजनामा लगानी गर्ने काम भइरहेको छ। मेरो सरकारको जोड पनि नेपालमा बढीभन्दा बढी क्यानाडेली लगानीकर्ता आऊन् भन्ने नै हो।
एउटा काठमाडौं-हेटौंडा सुरु ङमार्ग र अर्को एउटा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा लगानी गर्न क्यानाडेली लगानीकर्ता आइसकेका छन्। यो सुरु आतमात्र हो। यसले अन्य लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने विश्वास छ।
यी दुई आयोजनाको काम सुरु भएपछि यसले अन्य लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश दिन्छ। नेपाल लगानीका लागि राम्रो गन्तव्य हो र नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ भन्ने सन्देश गएपछि अन्य लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन्।
अहिले नै पनि धेरैभन्दा धेरै क्यानाडेली कम्पनीहरूले लगानी गर्न उत्साह देखाइरहेका छन्।
दीपक ओबराय, संसदीय सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रालय तथा मानव अधिकार
धेरै विकास साझेदारले विभिन्न कारणले विकास सहायताको बजेट कटौती गर्न थालेका छन्। यसबारे क्यानाडाको योजना के छ?
छैन। हाम्रो बजेट कटौतीको कुनै योजना छैन। पछिल्लो ५० वर्षमा क्यानाडाले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग मिलेर सहायता गरिरहेको छ।
सबै लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भ न्छन्। के राजनीतिक स्थायित्व नै लगानीको पहिलो सर्त हो?
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्न र सुरक्षाका लागि राजनीतिक स्थायित्व खोज्नु स्वाभाविक हो।
राम्रो र स्थायी राजनीतिक वातावरणले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ। लगानी बढ्नु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो। रोजगारीले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउँछ। यसको कारण जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्छन्।
नेपालमा धेरै विकास साझेदार राजनीतिक प्रक्रिया तथा प्रजातन्त्रका लागि बढी सहायता गर्न उत्साहित छन्। तर आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्, किन?
नेपाल हाल राजनीतिक संक्रमणकालबाट अघि बढिरहेको हुनाले प्रजातन्त्र र असल शासनका लागि सहयोग गर्नु स्वाभाविक नै हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा माओवादी जनयुद्धजस्ता अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमले लगानीकर्तामा गलत सन्देश गइरहेको छ।
लगानीकर्ता आकर्षित हुनसकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरताले नै लगानीकर्ता आकर्षित नभएका कारण पनि यही क्षेत्रमा सहायता बढी भएको हो। तर जब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ र आर्थिक विकासको चरण प्रारम्भ हुन्छ, तब आर्थिक विकासका लागि लगानीकर्ता आउँछन्।
जब देशमा सुशासन हुन्छ, तब जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, आफैं सही र गलत छुट्ट्याउनसक्ने हुन्छन्। त्यसका लागि नेताले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसारको काम गर्नुपर्छ।
जनतालाई आफ्नो आवश्यकता पर्दा नेताले हामीलाई साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास हुनु आवश्यक छ। सुशासनको प्रमुख आधार जनतामाथिको विश्वास र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु हो। जो शक्तिमा छन्, उनीहरूले जनताको आवश्यकताअनुसार काम गर्नु प्रजातन्त्रको मूल मर्म हो।
त्यसपछि मात्रै जनतालाई आफ्ना नेतामाथि विश्वास हुन्छ। प्रतिबद्धताअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसके जनताले अर्को चुनावमा नयाँ नेता छान्छन्। यो प्रक्रिया हो। यसबाट नै विकासको आधार तयार हुन्छ।
मतदान नै सर्वोत्कृष्ट उपाय हो जनताको अभिमत बुझ्ने। तर नेपाल हाल संक्रमणकालबाट अघि बढिरहेको हुनाले सुशासन र प्रजातन्त्रको आवश्यकता बढी भएको हो। जब संक्रमणकाल सकिन्छ, त्यतिखेर पनि यिनै आधारहरूमाथि टेकेर राज्य सञ्चालन हुन्छ र विकासका आधार पनि तयार हुन्छन्।
त्यसको अर्थ सुशासन र प्रजातन्त्रका लागि आइरहेको सहायता आर्थिक विकास तथा लगानीमा परिणत हुन अझै केही समय लाग्छ भन्ने हो?
हो। अन्त्यमा आर्थिक विकास नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब जनताले रोजगारी पाउँछन्, उनीहरू आर्थिक रूपमा सबल हुन सक्छन्। तर त्यसका लागि सुशासन र प्रजातन्त्र प्रमुख सर्त हो। यसको कारणले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मद्दत पुग्छ।
विगतमा हामीले विकासका लागि पनि सहायता गरेका थियौं। तर त्यो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि केन्द्रित थिएन। तर अब क्यानाडाले नेपालसँग व्यापारिक साझेदारका रूपमा सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको छ। मेरो यो भ्रमण यही सन्देश दिनलाई नै हो।
यसको अर्थ क्यानाडाले नेपालमा आर्थिक सहायताबाहेक नयाँ आयोजनामा लगानी गर्ने घोषणा गर्दैछ भन्ने हो?
आयोजनामा लगानीको घोषणा लगानीकर्ताले गर्नेछन्। तर क्यानाडेली सरकारले नेपाली तथा क्यानाडेली लगानीकर्ताबीच सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छ। म सरकारको प्रतिनिधि हुँ।
सरकार आफैंले लगानी गर्दैन तर सहजीकरण गर्नमा जोड दिन्छ। सरकारले सुशासनका लागि सहायता गर्छ। हामी दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी बढेको हेर्न चाहन्छौं।
दुवै देशका लगानीकर्ता एकआपसमा बढीभन्दा बढी सहकार्य गरेको हेर्न चाहन्छौं। यसरी हामी नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदार हुन चाहन्छौं।
नेपालमा जलविद्युत्, दूरसञ्चार, भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ। त्यसैले राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य तथा सुशासनले धेरैभन्दा धेरै क्यानाडेली लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्छ।
लगानीकर्ताका लागि समयमा नै संविधान आउनु कत्ति आवश्यक छ?
लगानीकर्ताको एउटै मात्र चिन्ता राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्व नभएको अवस्थामा लगानीकर्ता आउँदैनन्। संविधान राजनीतिक स्थायित्व हुने एउटा अवस्था हो।
संविधान आयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुनसक्छ भन्ने लगानीकर्ताको मान्यता हो। नेपाललाई अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिबाट अगाडि बढाउन पनि संविधान आवश्यक छ। तर त्यो नेपाली जनताको आफ्नै हातमा छ। राजनीतिक स्थायित्व कसरी आउँछ भन्ने कुरा नेपाली आफैंले सोच्ने हो।
राजनीतिक स्थायित्व भएपछि धेरै लगानीकर्ता नेपालमा आउन थाल्छन् तर यही संक्रमणकालमा नै आउने लगानीकर्तालाई पछि आउनेलाई भन्दा बढी फाइदा हुन्छ नि होइन र?
निश्चय नै हो। त्यसैले पनि अहिले मेरो यो भ्रमण भएको हो।
५० वर्षको दौत्य सम्बन्धपछि नेपाल र क्यानाडाको सम्बन्ध अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो?
हो। त्यसैले अब मेरो सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न लागेको छ।
नेपाल सरकार र क्यानाडेली सरकारले दुई देशका लगानीकर्तालाई एकआपसमा सम्बन्ध विस्तार गर्न वातावरण बनाइदिने प्रयास गर्नेछौं। नेपालमा धेरै सम्भावना छन्।
हामी क्यानाडेली लगानीकर्तालाई नेपालमा जाऊ र लगानीका सम्भावना हेर भनेर सहजीकरण गर्नेछौं। तर निर्णय गर्ने काम भने लगानीकर्ताको नै हो। नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखेर उनीहरू उत्साहित छन्।
– अन्नपुर्ण दैनिक बाट साभार